कर्मचारीको नियति - Pradesh Today कर्मचारीको नियति - Pradesh Today
एकाबिहानै मोवाइल घ्वार्र घ्वार्र ग¥यो । म निद्रामै रहेछु ब्युझिए । मोवाइलमा फोन आएको रहेछ । मेरो मोवाइल प्राय भाइब्रेसन मोडमा हुन्छ ।
बिहानीको निद्रा सबैलाई प्यारो हुने गर्दछ । त्यसमा पनि म अलि बढी सुत्ने मान्छे । रातिमा जतिसुकै ढिलासम्म बस्न सकेपनि बिहान चाँडै उठेको दिन दिनभर शरीर ह्याङओभर भएजस्तो हुन्छ । फोन आएपछि निद्रा खुलिहाल्यो । जाँगर नलागी–नलागी मोवाइल हेरे ।
मिना भाउजूको फोन रहेछ । जुरूक्क उठेर फोन रिसिभ गरे । उहाँ हतार–हतारमा बोल्नुभो । बाबु नवीन दाइ निजामती अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ । उहाँको अवस्था सिरियस छ । मसँग भएको पैसा पनि सकिसक्यो तपाई जतिसक्दो छिटो आउनुस् है ! मैले धेरै सोच्नै सकिन के भनौँ के नभनौँ भयो, हुन्छ भाउजू म आउछु भनेर फोन राखिदिए ।
एकैछिन त मलाई निद्रामा छु र यो सबै सपना हो जस्तो लाग्यो । आफैलाई चिमोटे होइन रहेछ । म त बिपनामै रहेछु भन्ने कुरा कन्फर्म भयो । के भएको होला दाजुलाई । त्यस्तो कुनै रोग भएको पनि थाहा थिएन । अचानक के पो भयो फेरी, ढुकढुकी बढ्न थाल्यो ।
के गरौँ कसो गरौँ भयो ? एकछिनपछि बाथरूम छिरे फ्रेस भए । कपडा चेन्ज गरे । बाइक निकाले । बाइकको एक्सिलेटर बटारे बाइक आफ्नै गतिमा अघि बढयो ।
मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन । मलाई कर्मचारी हुनुमा पहिलोपटक ठूलो लज्जाबोध भयो । आखाँहरू रसाउन थाले । शरीरमा चिरचिर पसिना आयो । अनायासै चिच्याउन थालेछु इमान्दार कर्तब्यनिष्ट राष्ट्रसेवकको मृत शरीरमा टेकेर देशलाई लुट्नेहरू सुखले बाँच्न नपाउन् किरा परेर मरून् ।
बाइकको गतिभन्दा मेरो मनको गति झनै तिब्र भइदियो । मन कल्पनाको संसारमा फनफनी चक्कर लगाउन थाल्यो र नवीन दाजुको तस्विरमा गएर टक्क अडियो । ६ फिट १ इन्च उचाई, गोरो छुदा पनि दाग लाग्ला जस्तो छाला, जिम गरेर बनाएका दरिला र आकर्षक पाखुरा, बीचमा सिउँदो बनाएर दुबैतिर फर्काएको कालो लामो कपाल, आँखाबाट कहिल्यै नहराउने कालो चस्मा ।
कुनै सिनेमाको हिरोभन्दा कम देखिनुहुन्नथ्यो । उहाँको व्यक्तित्वबाट त यसै प्रभावित थिए नै उहाँले पछ्याएको बाटो र उहाँको विचारबाट झनै बढी आकर्षित हुन पुगेको थिए । पेशाले उहाँ निजामती कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो ।
हाम्रो गाउँको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएर उपसचिव बन्नु चानचुने कुरा थिएन । उहाँ हाम्रो समाजको लागि उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । कसैले आफ्ना बच्चाहरूलाई सफलताको उदाहरण पेश गर्दा १ नम्बरमा उहाँकै नाम आउने गर्दथ्यो ।
मेरो लागि त हौसला र प्रेरणाको स्रोत नै उहाँ हो भन्दा फरक पर्दैन । यो धर्तीमा साँच्चिकै भगवान छन् वा छैनन् त्यो त मलाई थाहा छैन ? तर मेरो जीवनमा मेरो आमाबुवा पछिको साक्षात भगवान र मेरो जिन्दगीको आदरणीय गुरू उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो ।
मलाई निजामती सेवामा आउन प्रेरित गर्ने व्यक्ति उहाँ नै हो । नवीन दाइ २०५७ सालमा सहलेखापाल पदमा नाम निकालेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा मलाई लोकसेवा भनेको के हो ? सायद थाहा थिएन होला ? उहाँको यात्रा त्यतिमै टुंगिएन ।
२०५९ सालमा राजस्वको नायव सुब्बा र २०६२ सालमा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत पदमा सिफारिस भएपछि गाउँमा उहाँको चर्चा परिचर्चा शुरू भएको थियो । त्यतिबेला मेरो बाल मस्तिस्कले धेरै कुरा बुझ्न नसकेपनि उहाँ ठूलो पदमा पुग्नुभएछ भन्ने चाहिँ बोध भएको थियो ।
हाम्रो घर नजिकै भएको कारणले नवीन दाइ बिदामा घर आएको बेला भेट हुन्थ्यो । मैले एसएलसी सकेदेखि नै उहाँले लोक सेवाको तयारी गर्नुपर्छ है भनेर बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो ।
लोकसेवा आयोगको कार्यालय नजिकै छ तर यहाँका मान्छेहरूलाई लोकसेवामा दरखास्त खुलेको थाहा नै हुँदैन ? बाहिर जिल्लाका मान्छेहरू आएर फर्म भर्छन् र पास हुन्छन् । यहिको मान्छे सिफारिस भएर आए हामीलाई काम गर्न कति सजह हुन्थ्यो तर कसैलाई वास्ता छैन भन्नुहुन्थ्यो ।
लोकसेवामा कसैको सिफारिस चल्दैन, जुनसुकै पावरले पनि काम गर्दैन, काम गर्छ त केवल मेहनत, क्षमता र लगनशीलताले । त्यसैले हामीजस्ता मान्छेहरूको लागि रोजगार र समाजसेवाको माध्यम सारथी भनेकै लोकसेवा नै हो ।
म उहाँको समाजमा रहेको इज्जत प्रतिष्ठा सम्मानबाट निकै प्रभावित थिए । त्यसैले मैले पनि निजामती पेशालाई नै अंगाल्ने प्रण गरे । मेरो नायव सुब्बाको लिखितमा नाम निस्केको खबर शुरूमा नवीन दाइले नै दिनुभएको थियो । शुरूमा त विस्वासै लागेन ।
लोकसेवाको वेवसाइट खोलेर हेरेपछि बल्ल कन्फर्म भए । म त्यसपछि झन उहाँसँग नजिक हुन थाले । इन्टरभ्यूअघि कार्यालय रोज्ने सिलसिलामा उहाँसँग मरामर्श गरे । उहाँले भन्नुभयो ‘तिमी यही पदमा रोकिनुहुन्न अधिकृतमा नाम निकाल्नुपर्छ ।’ त्यसैले धेरै काम नहुने र पढन पाइने, पाठ्यसामग्री सजिलै उपलब्ध हुने सुगम ठाउँमा रहेको कार्यालय रोज्दा राम्रो हुन्छ ।
लोकसेवाले उपलब्ध गराएको कार्यालयको लिस्ट हेरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो । एउटाकुरा भनम भाइ मैले लेखा, राजस्व र सामान्य प्रशासन क्षेत्रमा काम गरे तर न्याय क्षेत्रमा काम गर्न पाएन । न्यायमा काम गर्ने रहर थियो अब त्यो पूरा हुन सम्भव छैन ।
तिमी मलाई मेरो आफ्नै भाइजस्तो लाग्छ त्यसैले तिमीले मैले भनेको मान्छाँै भने पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर रोज काम पनि धेरै हुँदैन अर्को कुरा म आफै न्याय सेवामा काम गर्न नपाएपनि मेरो भाइले मेरो धोको पूरा ग¥यो भनेर सन्तुष्ट हुनेछु ।
अनि अर्को कुरा समाजमा सम्पत्ति र पाखुराको बलमा सिधासाधा र निर्धालाई हेप्ने जुन प्रवृति छ । त्यसको लागि समेत गतिलो झापड हुनेछ तिम्रो रोजाइ किनकि अदालत जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो भने अदालतमा काम गर्न पाउनु तिम्रो शौभाग्य ।
नभन्दै म पुनरावेदन अदालत तुलसिपुर (हालको उच्च अदालत) मा नै सिफारिश भए । म सिफारिस भएको दिन उहाँको अनुहारको चमक झनै बढेको थियो । त्यस दिन उहाँले भन्नुभएको थियो– हाम्रो गाउँले २०५७ सालमा म निजामती सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् १४ बर्षपछि तिमीलाई निजामती कर्मचारीको रूपमा पाएको छ । मेरो छाति खुशीले चौडा भएको छ ।
तिमिले मेरो मार्गलाई पछ्याएका छौँ । यति सानो उमेरमा नायब सुब्वाबाट सेवा प्रवेश गरेका छौँ, तिम्रो यात्रा मेरो भन्दा निकै लामो छ । जागीर खानभन्दा जोगाउन गाह्रो छ, मान्छे बन्न जति गाह्रो छ बिग्रन कैयौ गुणा सजिलो, हरेक ठाउँमा सुझबुझपूर्ण तवरले काम गर्नु तिमीलाई उच्चतम् सफलताको शुभकामना ।
तुलसीपुर पुगेर पैसाको जोहो गरिसकेपछि भाउजूलाई पुनः फोन गरेर दाइको अवस्थावारे चासो राखे । आइसियुमा हुनुहुन्छ भेट्न जान दिएको छैन भन्ने खबर आयो । खासमा के भएको हो भनेर सोधे ।
के हुनु बाबु दशा लागेको हो स्थानीय तहमा नजानुस् भनेर भनेको मान्नुभएन अहिले यो दुर्गति भोग्नुप¥यो । पापीहरूले फसाए नि मेरो सोझो लोग्नेलाई उनीहरूको कहिल्यै भलो नहो्स भाउजूको आवाज चर्कियो ।
नआत्तिनुस भाउजु दाजुलाई केही हुँदैन । पैसाको बन्दोबस्त भइसक्यो । म तुलसीपुरबाट हिड्दैछु साँझसम्म काठमाडौँ आइहाल्छु । म आएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ । भाउजूलाई ढाडस दिने प्रयास गरे । मलिन आवाजमा हुन्छ चाँडै आउनुस् बाबु भनेर फोन राख्नुभो ।
दुईजोर कपडा झोलामा राखेर म सरासर घोराही रोड पुगे । एउटा हाइस भेटियो । गाडीमा बसे । गाडी पूर्वतिर लाग्यो । गाडीमा सबैजना आफ्नै तालमा मस्त थिए । कोही बजिरहेको गीतको धुनमा रमाइरहेका थिए । कोही मोबाइलमा भुलिरहेका थिए ।
केही नजिकैको साथीसँग गफ गर्न तल्लीन देखिन्थे । मेरो मन भने बिहानैदेखि अस्थिर थियो । तसर्थ यि केही कुराले छुन सकिराखेको थिएन । मेरो मस्तिष्कभरी खाली नवीन दाइ मात्र आइरहनुहुन्थ्यो ।
भाउजूले पापीहरूले फसाए भनेपछि मेरो ध्यान विगततर्फ मोडियो । साउनको दोस्रो हप्तातिर एकदिन साँझपख नवीन दाइले फोन गर्नुभयो । त्यो दिन उहाँको प्रस्तुति अलिक भिन्दै थियो । सधै सकारात्मक सोच राख्ने उहाँले मलाई जटिल र असम्भव लाग्ने गरेका समस्याहरू पनि मुसुक्क हाँसेर सहजै सुल्झाइदिनुहुन्थ्यो । तर त्यो दिन उहाँ विरक्त लाग्दो शैलीमा मसँग प्रस्तुत हुनुभयो । भाइ स्थानीय तहमा कसरी काम गरेर बसेको छौ यार ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
म उहाँकै भरमा गृह छोडेर स्थानीय तहमा काम गर्न आएको मान्छे । उहाँ त दुई वर्षमा दुइवटा स्थानीय तहमा बिताइसक्नुभएको थियो । त्यसमा पनि दुबै ठाउँमा राम्रो काम गरेको भनेर जताततै उहाँको जय–जयकार सुनिन्थ्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत उहाँसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने चर्चा थियो ।
अघिल्लो वर्ष उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार जितेका उहाँलाई मैले त स्थानीय तहको विज्ञ नै ठान्दथे किनकि उहाँका सल्लाह, सुझावहरू मैले काम गर्दा पर्ने हरेक समस्याको ओखती साबित हुने गर्दथे । शुरूमा त उहाँलाई दारू लागेछकी जस्तो लाग्यो । कुरा गर्दै जाँदा पो थाहा भयो उहाँ त गम्भीर समस्यामा परेर त्यसो भन्नुभएको रहेछ । दाजुप्रति अगाध माया र श्रद्धा जागेर आयो ।
उहाँले समस्याको बेलीबिस्तार शुरू गर्नुभयो । असार महिनाको २८ गते उहाँको टेबलमा एउटा फाइल आइपुग्छ योजनाको अन्तिम भुक्तानीका लागि । योजना थियो सडक कालोपत्रेसम्बन्धी, श्रोत सांसद विकास कोष, बजेट ५० लाख ।
नगरपालिकामा फागुनमा बजेट प्राप्त भएको रहेछ । बजेट प्राप्त हुनासाथ उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि समितिका पदाधिकारी उपस्थित भएछन् । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नका लागि प्राविधिक जटिलता हुने भएकोले ठेक्का मार्फत काम गर्नुपर्ने भनि शुरूमा दाजुले फिर्ता गर्नुभएछ ।
त्यसपछि ठेक्कामार्फत काम गर्दा ठेक्काको लागि एक महिना सूचना प्रकाशन गर्ने टाइम लाग्ने र समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भनी नगर कार्यपालिकाबाट उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराई माननीय ज्यू, मेयरसापबाट अनुरोध भएपश्चात् दाजुले बाध्य भएर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुभएको रहेछ ।
केही दिनअघि पालिकास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्दा उक्त योजनाको कार्य आधामात्र सम्पन्न भएको हुँदा आधामात्र भुक्तानी हुन्छ भनेपछि उपभोक्ता समितिका मानिसहरूले योजनाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री खरिद गरिसकेको हुँदा योजनाको सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्ने अन्यथा भुक्तानी नलिने भन्दै केही दिनअघि भुक्तानी नलिएर हिडेका रहेछन् ।
अहिले दाजुले फाइल खोलेर हेर्दा कन्टिन्जेन्सी बाहेक पूरै ४७,५०,०००÷– को बिल उठेको रहेछ । त्यसपछि काम नभएको बिल भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ दाजुले दिएपश्चात् उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले योजना पार्ने माननीय ज्यूलाई फोन लगाएर दाजुलाई दिनुभएछ ।
माननीय ज्यूले यो बर्ष भुक्तानी नदिएमा बजेट फ्रिज जाने र नगरको विकास पनि हुन नसक्ने र उपभोक्ता समितिले आवश्यक सामान अर्डर समेत गरिसकेको हुँदा भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्नुभएछ ।
भोलिपल्ट बिहानै मेयरसापले मैले उक्त सडक यही साउनभित्र कालोपत्रे गर्ने आश्वासन जनतालाई दिएसकेको, उपभोक्ता समितिलाई पनि घाटा लागेको र बाँकी कामको जिम्मा आफूले लिने त्यसको लागि जे गर्न पनि तयार रहेको र तपाईलाई कुनै पनि अप्ठेरो पर्न दिन्न भनेपनि दाजुले काम सकेपछि मात्र चेक दिने शर्तमा पूरै रकमको चेक काटेर राख्नुभएको रहेछ ।
दाजु असारको काम सकेर घरमा आएको समयमा मेयरसापको आदेशमा हाकिमसँग कुरा भइसकेको छ भनेर लेखालाई उक्त चेक समितिलाई हस्तान्तरण गर्न लगाइएछ ।
चेक बुझेको दुई दिनपछि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष फरार भएछन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हराएको एक हप्तापछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालयबाट पत्र आएछ । त्यसैदिन दाजुले फोन गर्नुभएको रहेछ ।
अख्तियारको १३ पाने भरेदेखि नै दाजुको अनुहारको चमक हराएको थियो । जागीरबाट निलम्बनमा परेपछि उहाँको शिर कहिल्यै ठाडो देखेको थिएन । खाली एकान्तमा बस्न खोज्नुहुन्थ्यो, एकोहोरो जस्तै हुनुभएको थियो ।
गाउँघरमा डिप्रेसनको औषधी खानुहुन्छ भन्ने हल्ला थियो । यस्तै कुरा मनमा सोच्दा–सोच्दै गाडीमै निदाएछु । राति ११ः०० बजे दाइ तपाई कलंकी झर्ने भनेको होइन भनेर छेउमै रहेको भाइले बोलाएपछि झसंग भए । गाडीबाट झरेर नयाँ बानेश्वर जानका लागि ट्याक्सी चढे । करिब १२ः०० बजे निजामती अस्पतालको आई.सी.यु. कक्ष अगाडी पुगे ।
मिना भाउजू र उहाँको भाइ (महेश सोल्टी) त्यहि कुरिराख्नुभएको रहेछ । भाउजू निकै थकित देखिनुहुन्थ्यो । मलाई देखेर थोरै राहतको महसुस गर्नुभयो सायद । महेश सोल्टीले र मैले सल्लाह गरेर भाउजूलाई रेष्ट गर्न भन्यौ । उहाँ होटेलतिर लाग्नुभो ।
भाउजू गएपछि मैले महेश सोल्टीसँग घटनाको बारेमा चासो राखे । त्यो दिन उहाँपनि सँगै हुनुहुँदोरहेछ । विशेष अदालतको इजलास नम्बर २ । मुद्दाको पेशी नम्बर ६ । दिउँसो २ बजे पालो आएछ । शुरूमा सरकारी वकिलको बहस । सरकारी वकिलले बहस शुरू गरेछन् ।
५०० मिटर बाटो कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा जम्मा २०० मिटर मात्र बाटो कालोपत्रे गरी फाइल मिलाएर भुक्तानी गरेको देखिन्छ श्रीमान् । यो मुद्दामा प्रतिवादीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सबैजनाको मिलेमतो पुष्टि गर्ने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।
योजना अनुगमन समितिले आधामात्र काम भएको भनी प्रतिवेदन पेश गर्दागर्दै प्राविधिक कर्मचारीलाई साथमा लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पूरै काम भएको बिल उठाई भुक्तानी दिएको र भुक्तानी दिने कार्यमा लेखा र योजना शाखाका कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको हुँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसहित सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम हदैसम्मको कारवाही होस् भन्ने माग गर्दछु ।
सरकारी वकिलको बहसपश्चात् नवीन दाइले इजलासमा आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति माग्नुभएछ । न्यायाधीसको अनुमतिपश्चात् नवीन दाइ बोल्नुभएछ मैले सिंगो नगरपालिकाको विकासका लागि यत्रो मेहनत र तपस्याले प्राप्त गरेको जागीरलाई दाउमा राखेर समितिको विश्वासमा परी तत्कालै काम गर्ने शर्तमा योजनाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेको हुँ ।
मैले सरकारको सिन्दुर पहिरिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् आजसम्म कसैबाट एक रूपैयाँ लिएको पुष्टि भएमा म खुलामञ्चमा झुण्डिएर मर्न तयार छु । घरमा रहेका अनेकौ समस्या र अनेकौ आश्वासनका बाबजुद पनि मैले आफूलाई बेचिन भने के म उपभोक्ता समितिसँग ¥याल काढेर बसेहुँला श्रीमान् ? यहाँहरूले मेरो घरायसी अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ ।
सम्पत्ति विवरण चेक गर्न सक्नुहुन्छ । आम्दानीको श्रोत र खर्चको विवरण बुझ्न सक्नुहुन्छ । मैले छोरालाई पढाउनका लागि पुर्खौली सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेको छु, घरबाट पानि चुहिने हुदाँसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन । खाएको विष पो लाग्छ त श्रीमान् नखाएको विषको नाटक कसरी गरू ?
त्यसपछि उपभोक्ता समितिको सचिव कहाँ पुगेर दुई हात जोडेर बिन्ति बिसाउनुभएछ जनताको सेवकले जनताको हितको लागि काम गर्दा यस्तो नियति भोग्नुपर्छ भने आम कर्मचारीले कसरी उत्प्रेरित भएर काम गर्लान् ?
सचिवजी तपाईलाई त सबैकुरा थाहा छ नि इमान धर्म सम्झेर यथार्थ कुरा सम्मानित इजलास समक्ष बताइदिनुस् मलाई यो चक्रव्यूहबाट पार लगाइदिनुस् । यति भनेर हात जोडेर सचिवको पाउ छुन खोज्दा एक्कासी भुइमा ढलेर अचेत हुनुभएको रहेछ ।
हामी कुरेर बसिराखेका थियौँ । विहान करिब १२ः३५ बजेतिर केही डाक्टरको टोली आई.सी.यु.तिर प्रवेश ग¥यो । हामी उभिएर हेरिराख्यौ । त्यसको केहि मिनेटपछि उक्त टोली बाहिरियो । टोलीका प्रमुख सिनियर डाक्टरले हामीलाई नियालीसकेपछि बिस्तारै बोले हामीले सक्दो प्रयास गर्यौँ । केश एकदमै जटिल रहेछ हामीले तपाईको मान्छेलाई बचाउन सकेनौँ सरी । यति भनेर डाक्टरको टोली आफ्नो बाटो लाग्यो ।
(रेग्मी सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)
डेंगु रोगमा सजकता अपनाऔं
असोज ०१, २०७६
सकियो हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान
मङि्सर २५, २०७६
भिष्म स्मृति प्रतिष्ठानको साधारण सभा १८ गते